Mihanaka Ao Maraoka ny Fihetsiketsehana Taorian’ny Fahafatesana Feno Herisetra Nahazo ilay Mpivarotra Trondro · Global Voices teny Malagasy
Mihanaka Ao Maraoka ny Fihetsiketsehana Taorian'ny Fahafatesana Feno Herisetra Nahazo ilay Mpivarotra Trondro
Voadika ny 03 Novambra 2016 6:47 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Italiano, Nederlands, Español, Filipino, Ελληνικά, English
Sarin'i Mouhcine Fikri miaraka amin'ny tenirohy roa malaza indrindra nipariaka tao amin'ny media sosialy “#طحن ـمو” (‘hitsaho ny reniny’) sy “#كلناـمحسن ـفكري” (‘Mohsin Fikri izahay rehetra’). Sary: SaphirNews.
Maty voahitsaky ny kamiao mpanary fako i Mohsin Fikri, 31 taona, mpivarotra trondro avy ao El Hoceima, avaratr'i Maraoka (Rif) tamin'ny Asabotsy 29 Oktobra raha niezaka naka ny trondrony “espadon” —fidiram-bola tokana ho azy. Nalain'ny polisy an-keriny vao maraina ny trondrony, noho ny fandraràna fivarotana trondro amin'izao vanin-taona izao. Nilaza ireo mpikatroka fa nanome baiko handefasana ny kamiao ny polisy raha mbola tao anatiny tao i Fikri.
Raha vao niparitaka ny vaovao fahafatesana feno herisetra nahazo an'i Fikri, nipoaka manerana an'i Maraoka ny fihetsiketsehana, miely ao El Hoceima hatrao Marrakesh sy Rabat, renivohitra. Mampiasa ny tenirohy “#طحن_مو,” midika mitovitovy amin'ny hoe “torotoroy ny reniny,” naneho ny fahatezerana ny Maraokana ary namoaka lahatsary sy sarin'ny fihetsiketsehana. Ny hevitry ny tenirohy dia voalaza fa izany teny izany no nolazain'ny iray tamin'ireo polisy fotoana fohy talohan'ny namonoan'ny kamiao an'i Fikri.
Maro tamin'ireo mpiserasera aterineto no namoaka lahatsary mivantana misy ny fihetsiketsehana tao amin'ny kaonty Facebook-n'izy ireo. Ity lahatsary manaraka ity dia nalain'ilay Maraokana mpaka sary, mpamokatra sarimihetsika sady mpikatroka Nadir Bouhmouch ny alin'ny Alahady 30 Oktobra tao Marrakech.
Nizara lahatsary misy ny fandevenana an'i Fikri ilay Maraokana mpikatroka, talen'ny Advox teo aloha Hisham Almiraat:
Funeral of fishmonger killed on Friday night turns to mass protest agnst police abuse in #Morocco – #COP22 #طحن_مو https://t.co/xuc3b7B7mY
Nivadika fihetsiketsehana goavana manohitra ny fihoaram-pefin'ny polisy ao Maraoka ny fandevenana an'ilay mpivarotra trondro maty tamin'ny Zoma alina
Nizara sary nalaina lavitra misy ny fandevenana i Samir Kinani:
Tsy mahagaga, maro ireo nampitaha an'i Fikri tamin'i Bouazizi, Toniziana mpivarotra amoron-dalana nandoro tena tamin'ny 17 Desambra 2010 rehefa nalain'ny polisy an-keriny ny entam-barony, ary lasa fitaovana nitarika ny Revolisiona Toniziana sy ny lohataona Arabo ankapobeny.
Lasa Mohamed Bouazizi ao Maraoka ankehitriny i Mouhcine Fikri. Tahaka an'i Tonizia tamin'ny 2011, maneho ny fahatezeran'izy ireo ny vahoaka.
Manana an'i Bouazizi azy manokana ankehitriny i Maraoka, Mohcine Fikri no anarany. Rahampitso amin'ny 7 hariva ny fihetsiketsehana eo anoloan'ny ambasadin'i Maraoka ao Paris.
Ity no farany amin'ireo andiana fihetsiketsehana nanozongozona an'i Maraoka tato anatin'ny taona vitsivitsy. Tany am-piandohan'ity taona ity, mpianatra mpiofana an'arivony no nidina an-dalambe hanao fihetsiketsehana manohitra ny fampihenana ny vatsy omen'ny governemanta, izay nolazain’ ireo mpianatra fa mahatonga ny fitadiavan'asan'izy ireo eo amin'ny sehatry fanabeazana ho sarotra kokoa.
Lasa fahazarana ao Maraoka ny fihetsiketsehana manohitra ny herisetran'ny polisy amin'ny ankapobeny sy ny fampiharana ny “hogra” (fanalam-baraka) indrindra indrindra. Nanomboka tamin'ny 2011, Maraokana am-polony mahery no nandoro ny tenan'izy ireo noho ny fahakiviana. Tamin'ny Aprily 2016, nandoro tena ny mpivarotra amoron-dalana iray rehefa nalain'ny polisy an-keriny ny mofony sy ny mofomaminy. Tamin'io volana Aprily io ihany, nandoro tena ihany koa ny mpivarotra amoron-dalana iray rehefa nalaina an-keriny ny “moto”-any.
Tamin'ny 2015, niray hina hanohitra ny herisetran'ny polisy tsy misy fitsaharana ireo mpivarotra an-dalambe ao Casablanca. Niteraka fisamborana mpivarotra an-dalambe tao Casablanca izany firaisan-kina izany. Matetika iharan'ny herisetra, voadaroka, ary voasambotra ireo mpivarotra amoron-dalana.
Tamin'ny 2013, tranga fandoroan-tena telo no notaterin'ireo vehivavy nilaza fa tsy mba nanome rariny ho azy ireo ny rafi-pitsarana. Namono tena tamin'ny Marsa 2012 i Amina Fillali, noterena hanambady ny mpanolana azy tamin'ny 2011. Tamin'ny Aogositra 2016, namono tena ny tovovavy iray rehefa navoakan'ny polisy ireo olona valo nanolana azy ary nandrahona hanaparitaka ny sariny naolana amin'ny aterineto.
Nandova an'i Maraoka ny mpanjaka Mohammed VI tamin'ny taona 1999 rehefa maty ny rainy Hassan II. Nanatontosa famoretana marobe tao Rif, faritra be tendrombohitra ao avaratr'i Maraoka ity farany ity. Nandritra ny fitroarana 1958–59 tao Rif, 80 isan-jaton'ny tafika Maraokana no nirahin'i Hassan II hanakana ireo fihetsiketsehana. Tamin'ny taona 1984, nandritra ny fihetsiketsehana manerana ny firenena, nanao ny lahateniny mahazatra niantso ireo mponin'i Rif ho “jiolahim-boto’ i Hassan II.
Nisafidy lalan-kafa ny mpanjaka Mohammed VI. Teo anelanelan'ny taona 2011 sy 2015, nandalo dingana fanomezam-pitantanana ho an'ny tsy miankina (privatisation) i Maraoka. Tamin'ny taona 2014, tao Guich Oudaya ao Rabat, narodan'ny manampahefam-panjakana ny tranon’ olom-pirenena mba hamarotana ny tany amin'ny orinasan'ny tany aman-trano. Voaraoka tao an-tanindrazany ny mponina ary noterena honina amin'ny trano bongo.
Tamin'ny 2015, Maraokana an'arivony no nanao fihetsiketsehana manohitra ny fidangan'ny vidin-jiro avy amin'ny orinasa Frantsay Amendis.
Tamin'ny 2008, nirongatra tao Sidi Ifni, tanànan'ny mpanjono ny fihetsiketsehana taorian'ny famoretan'ny polisy ireo mpanjono tsy an'asa, ary mpanao fihetsiketsehana folo no namoy ny ainy tamin'izany.
Tamin'ny 2014, nanasonia fifanarahana momba ny jono miaraka amin'ny Vondrona Eoropeana i Maraoka. Ho takalon'ny vola kely mitentina 30 tapitrisa euros isan-taona, manan-jo hanjono ao akaikin'ny morontsiraka Maraokana ny sambo miisa hatramin'ny 120 avy amin'ny firenena Eoropeana miisa 11 (Espaina, Portiogaly, Italia, Frantsa, Alemaina, Litoania, Lettonia, Hôlandy, Irlandy, Polonina ary ny Fanjakana Mitambatra).
Vitsy no avelan'ireo orinasa goavan'ny jono ho an'ireo mpanjono ao an-toerana, tsy mahazo mamelatra ny fintany ny mpanjono ao an-toerana, ka mahatonga ny olona tahaka an'i Mohsin Fikri ho tsy an'asa ary kivy.